Inhlangano yogogo ikhuthaza ukuzivocavoca | News24
Inhlangano yogogo ikhuthaza ukuzivocavoca
ISITHOMBE: sithunyelweAmalunga eSinamuva Senior Citizen’s Club akade edlala ibhola ngempelasonto.
ISINAMUVA Senior Citizen’s Club noku-yinhlangano engenzi nzuzo ibe nomncintiswano webhola ngoLwesithathu olwedlule mhla ziyisithupha kuNhlangulana (June) nalapho kade imeme khona ezinye izinhlangano eziseduzane nayo
Ngokusho kukasihlalo wale nhlangano uNkk Hazel Olifant uthe lo mncintiswano baba nawo minyaka yonke. Uthe banohlelo lokuthi kushintshwane njalo ngonyaka ekutheni iyiphi inhlangano ekuyiyona ezosingatha lo mncintiswano.
“Inhloso enkulu ukuthi seseke siphinde sinakekele abantu bakithi abadala, siphinde sibasiz e nangezinkinga zempilo ababhekene nazo. Sibuye sihlele izinhlelo zezemidlalo nesikholelwa ukuthi loko kubalulekile ukuze bezozigcina bephilile ngaso sonke isikhathi,” kubeka yena.
UNkk Olifant uthe le nhlangano ibhekelele zonke izaguga ezingaphansi kuka-ward 22. Uthe ngale midlalo abanayo basuke befuna ukuhlangana nabanye bakwezinye izinhlangano ngenhloso yokuthi badlale imidlalo yesihle.
Inhlangano edle umhlanganiso kulo mncintiswano kube yi-Elandskop Senior Citizen’s Club ngemuva kokubhaxabula iSinamuva Senior Citizen’s Club ngegoli elilodwa eqandeni.